Wordpress - Creativos Online | Creativos Online (Bogga 2)
7 casharro xiiso leh oo lagu qaabeeyo mawduuc WordPress ah oo ku yaal Photoshop
Sidee loo qaabeeyaa mawduucyada wordpress ee Adobe Photoshop? Sii wad akhriska!
5 Mawduucyada ugu Wanaagsan ee WordPress ee 2015
Kahor intaanu sannadka faraha ka bixin, waxaannu kuu dhaafi doonnaa xul xul ah oo ka mid ah 5-ta mawduuc ee ugu wanaagsan Wordpress ee 2015.
Isku-duwidda toban ka mid ah ereyada ereyada ee bilaashka ah. Soo ogow waxyaabo ku habboon boggagaaga oo si toos ah ugu soo dejiso iyaga oo bilaash ah.
25 Mawduucyada WordPress 2015
Isku-dubaridka 25 sheybaaradeed ee loogu talagalay wordpress-ka ku habboon sameynta boggaaga ama bartaada si deg deg ah oo fudud.
Falanqaynta WordPress 3.9
WordPress 3.9 waxaanan dooneynaa inaan ku siino aragtideena koowaad ee falanqeyntan aasaasiga ah ee ku saabsan wararka. Hore u soco oo na aqri oo fikirkaaga ka tag.
Haddii aad rabto inaad sameysid joornaal ama joornaal dijitaal ah, shaki la'aan waa inaad ku abuurtaa adigoo kaashanaya ...
Top 7 SEO-yada loogu talagalay WordPress
Ku meeleynta wanaagsan ee Google waa suurtagal mahadsanid Wordpress iyo wixii la mid ah. Soo ogow TOP 7 SEO-yada si aad u hagaajisid SEO-ga boggaaga oo aad garaacdo tartanka.
Waxaa jira kumaan kumbuyuutar oo ah qaab-bixinno tayo sare leh oo la bixiyo oo WordPress ah, laakiin sidoo kale waxaa jira kuwo bilaash ah. Qoraalkan waxaan kuugu keenaynaa 3 qaabab jawaab oo bilaash ah.
5 WordPress Plugins oo u Dabaaldegaya Kirismaska
Haddii aad rabto inaad ka il-baxdo WordPress-kaaga illaa Kirismaska, la soco qoraalkan aan ku soo ururinno 5 fiilooyin oo aad u qabow.
Mawduuca tikniyoolajiyadda ayaa runtii caan ku ah internetka, kaas oo ay jiraan bogag aad u tiro badan oo lagu daabaco waxyaabaha la xiriira mowduucan.
Mid ka mid ah waxyaabaha ay tahay inaad ka fekerto marka hore waa inaad hesho mawduuc la jaan qaadaya goobta oo kiiskan maanta waxaan keenaynaa 5 mawduucyo WordPress ah oo loogu talagalay makhaayadaha.
Goobaha ciyaarta fiidiyowgu waxay ku raaxaystaan ​​caan weyn websaydhka, badankooduna sidoo kale waxaa sabab u ah naqshadeynta iyo muuqaalka mawduuca la isticmaalay.
5 arrimo banner oo bilaash ah
Banner waa mid ka mid ah walxaha ugu muhiimsan ee kor u qaadista degel, waana sababta ay ugu dhowdahay in la hubiyo in nashqadeynta ay keeneyso saameyn muuqaal ah oo soo jiidasho leh martida.
5 Mawduucyada WordPress ee boggaga arooska
Waan ognahay in mawduuca uu aad u kala duwan yahay markaan ka hadlayno qaabeynta bogagga shabakadda ee aan isticmaali karno, maaddaama tan inta badan ay ku saleysan tahay nooca waxyaabaha ku jira goobta.
Cusbooneysiinta WordPress 3.6 iyo dhibaatada: haa mise maya?
Miyaad shaki ka qabtaa markaad cusboonaysiinayso Wordpress? Waa kuwan tallaabooyinka la raacayo si aanad waxba uga lumin bartaada. Si taxaddar leh u akhri oo ha ka baqin!
MotoPress: U qaabee WordPress adoo jiidaya oo hoos u dhigaya baloogyada
Waxaan soo bandhigeynaa MotoPress, oo ah fiilo loogu talagalay WordPress kaas oo kuu oggolaanaya inaad ku qaabeyso CMS si fudud oo fudud, adoo jiidaya oo ridaya waxyaabo ka kooban.
WP Retina 2x, oo ku hagaajineysa WordPress bandhigyada isha
WP Retina 2x waa qalab loogu talagalay WordPress kaas oo naga caawin doona abuurista @ 2x sawirro diyaar u ah in lagu soo bandhigo shaashadaha isha.
40 Mawduucyo qurux badan oo WordPress ah
Way cadahay in mawduuca ugu sarreeya ee 99% kiisaska uu aad uga fiican yahay mawduuc bilaash ah oo loogu talagalay ...